🥇 Ukubalwa kwezimali kwenhlangano yokulethwa
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 635
Ividiyo yokubalwa kwezimali yenhlangano yokulethwa
Oda ukubalwa kwezimali kwenhlangano yokulethwa
Ukuthuthukiswa kokuthuthukiswa kolwazi ezweni lanamuhla akumile. Njalo ngonyaka, kuvela ubuchwepheshe bakamuva ukusiza izinhlangano ziqhube ibhizinisi. Ngenxa yokuzenzakalela kwezinqubo zebhizinisi, zonke izinkomba zenziwa kahle. Ukubalwa kwezimali kwenhlangano yokulethwa kwenziwa kusetshenziswa uhlelo olukhethekile.
Uhlelo lwe-accounting olujwayelekile luqala ukusetshenziswa kunoma iyiphi inkampani, kungakhathaliseki ukuthi ingakanani izinsiza zokukhiqiza kanye nephrofayili yomsebenzi. Izinsizakalo zokuphatha ukulethwa zigcinwa ngokuqhubekayo ngokulandelana kwesikhathi. Okwenziwayo ngakunye kukhiqizwa ngesikhathi sangempela. Umuntu onesibopho uyasungulwa futhi inombolo ye-serial inikezwe.
Ekubaleni ukulethwa kwezinhlangano ze-courier, kuyadingeka ukunaka kakhulu indlela yokuthutha impahla. Ukuba khona kwemoto yakho enkampanini kudinga ukulawula ngokucophelela. Kuyadingeka ukwenza izinyathelo zokugcina isimo sobuchwepheshe, kanye, uma kunesidingo, umsebenzi wokulungisa.
Isevisi yokudiliva iyinqubo enesibopho esikhulu. Kuyadingeka ukulondoloza izakhiwo zezentengiselwano nokulawula okuqukethwe kulo lonke uhambo. Ukupakishwa okulungile kwezimpahla kudlala indima ebalulekile, ngakho udinga ukunikeza ulwazi olwengeziwe lapho uphetha inkontileka. Ngokusebenzisa izifanekiso zemibhalo ejwayelekile, inqubo yokugcwalisa amadokhumenti ithatha isikhathi esincane. Ngisho nochwepheshe be-novice emisebenzini yokuhlela ukulethwa kwezimpahla angakwazi ukubhekana nomsebenzi onjalo.
Uhlelo lwe-Universal Accounting System lunezigaba eziningi ezihlukene inkampani engazikhethela imisebenzi yayo. Izinsizakalo zokulethwa zihlale zithuthukiswa. Ikhwalithi ikhula futhi, ngokufanele, isidingo sikhula, ngakho-ke ukwethulwa kokucushwa kwanamuhla kuyadingeka.
Zonke izinhlangano zilwela ukukhulisa inzuzo yazo. Ngemuva kwesikhathi ngasinye sokubika, bahlaziya isimo sezinkomba zezimali ezisiza ukwenza izinqumo zokuphatha. Emhlanganweni, kuxoxwa ngezinhloso zamasu kanye nemisebenzi yamaqhinga. Uma kunesidingo, izinguquko zirekhodwa kunqubomgomo yokubalwa kwezimali.
Ukubalwa kwezinsizakalo zenhlangano yokulethwa kushintshwa kumodi ezenzakalelayo ukuze kugwenywe ukuphazamiseka okungenzeka emsebenzini wabasebenzi. Ukuthuthukisa izinqubo usebenzisa uhlelo olukhethekile kukuvumela ukuthi ugade ukusebenza ngakunye, futhi unikeze umbiko wanoma yisiphi isikhathi esikhethiwe. Ngenxa yomsebenzi wokuhlunga nokukhetha, ungenza isicelo ngemibandela futhi ugqamise, isibonelo, indawo yokugcina impahla noma ikhasimende.
Uhlelo lwe-accounting oluphelele luqukethe uhlaka olufaneleka kakhulu, olubandakanya ukuziphatha okugcwele kwemisebenzi yezomnotho. Umsizi we-elekthronikhi owakhelwe ngaphakathi nosekelo lobuchwepheshe kuzokusiza uma unemibuzo. Amagrafu akhethekile, izihlukanisi nezincwadi zereferensi zikuvumela ukuthi udale imisebenzi ejwayelekile ngefomethi elula. Abathuthukisi baye benza isiqiniseko sokuthi umsebenzi osohlelweni ufanelekile futhi ujabulise ngesikhathi sokusetshenziswa.
Sebenzisa kunoma yiliphi igatsha lomnotho.
Ukuqaliswa ezinhlanganweni ezinkulu nezincane.
Ukungena ngemvume ohlelweni kwenziwa kusetshenziswa igama lomsebenzisi nephasiwedi.
Ukwakhiwa okungenamkhawulo kwezindawo zokugcina izimpahla, izigaba, iminyango kanye nezinsizakalo.
Ukwakhiwa kwekhophi eyisipele yesistimu yolwazi kwiseva.
Izincwadi eziyizethenjwa zangempela nezihlukanisi.
Ukuvuselelwa kwedatha okufika ngesikhathi.
Ukudweba izinhlelo namashejuli esikhathi esifushane neside.
Ukushintshaniswa kolwazi ngewebhusayithi yenkampani.
Ukulungiselela ukubalwa kwezimali kanye nokubika kwentela.
Abasebenzi namaholo accounting.
Ukuqhathaniswa kwezinkomba ezihleliwe nezingokoqobo ngokusekelwe emiphumeleni yabaphathi.
Imibiko ehlukahlukene, izincwadi nomagazini.
Ukusatshalaliswa kwezimoto ngokwezimpawu zazo.
Ukudweba izilinganiso zezindleko nezilinganiso zebhajethi.
Ukunqunywa komthwalo womsebenzi.
Ukuhlaziywa kokuhlinzekwa kanye nesidingo samasevisi.
Ukubalwa kwezindleko zezinsizakalo.
Inkokhelo usebenzisa amatheminali okukhokha.
Ukubalwa kwezimali zokulethwa kwezimpahla.
Ukuhlonza izinkokhelo sekwephuzile.
Ukulandelela ukuthengiselana ngesikhathi sangempela.
Okukhipha idatha esikrinini esikhulu.
Ukusatshalaliswa kwe-SMS nezincwadi eziya ku-imeyili.
Ukuhlonza nokulungiswa komshado.
Ukuhlolwa kwekhwalithi yezinsizakalo ezinikeziwe.
Umsizi we-elekthronikhi owakhelwe ngaphakathi.
Izifanekiso zamafomu ajwayelekile amadokhumenti ahlukahlukene anelogo nemininingwane yenkampani.
Isisekelo esihlanganisiwe sabahlinzeki namakhasimende.
Ukubalwa komsebenzi wokulungisa nokuhlolwa, uma kukhona iyunithi ekhethekile.
Okuzenzakalelayo okugcwele kwemisebenzi.
Ukuthuthukisa izinqubo zebhizinisi.
Ukulawula isitatimende sasebhange.
Isixhumi esibonakalayo sesimanje esisebenziseka kalula.